The Spears & Munsil High Definition Benchmark Blu-ray Fanontana faharoa - MediaLight Bias Lighting
Home Ny spear & Munsil famaritana avo Benchmark Blu-ray fanontana faharoa
Ny spear & Munsil famaritana avo Benchmark Blu-ray fanontana faharoa
Vidiny tany am-boalohany $29.95 - Vidiny tany am-boalohany $29.95
Vidiny tany am-boalohany
Vidiny ankehitriny $29.95
Na novice an-trano ianao na calibrator matihanina dia ho hitanao ny fitsapana rehetra ilainao hametrahana sy hanamboarana ny HDTV anao amin'ny Spear sy Munsil HD Benchmark.
Ny fanontana teo aloha ny HD Benchmark dia natolotry ny New York Times, Widescreen Review, Home Theater Magazine ary famoahana printy sy an-tserasera am-polony hafa. Ity edisiôna vaovao ity dia mitazona ny fiasa rehetra an'ny kapila teo aloha ary manampy endri-javatra vaovao am-polony, ao anatin'izany:
• Drafitra fanitsiana sy fanombanana stereoscopic 3D
• Fanandramana feo ho an'ny fanamafisam-peo, fanamafisam-peo ary fampifanarahana A / V
• lamina mihetsika hijerena ny maody interpolation 120Hz sy 240Hz
• Fanampiana bebe kokoa ho an'ny vao manomboka ny teatra an-trano
• lamina bebe kokoa ho an'ny mpampiasa mandroso na kalibrator matihanina
Ny Spears sy ny Munsil HD Benchmark dia fitaovana tsara ho an'ny arsenalanao fanamafisana! Ny lamina rehetra dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fitaovan'ny rindrambaiko tena avo lenta sy avo lenta an'i Spears sy Munsil ary maneho ny toetoetran'ny kanto amin'ny famokarana horonantsary.
Mariho fa ny lamina 3D rehetra dia mitaky mpilalao 3D Blu-ray Disc sy fahitalavitra 3D. Ny fitaovana 2D dia hilalao amin'ny mpilalao Blu-ray Disc.
5.0 Miorina amin'ny 4 Reviews
Sort farany indrindra Highest Rating Rating ambany indrindra Mahasoa izao
Diska famaritana…. tsara
Tsara… mora ampiasaina… .. TV vaovao…. "Tapitra" ny fanovana… .. tamin'ny fampiasana kapila fanamafisana ity kalitaon'ny sary ratsy tsy tsara ity. Vetivety dia natolotra ny kapila….
Serivisy DVD sy mpanjifa tena tsara
Niavaka ny zavatra niainako tamin'ny ankapobeny. Nanana olana aho ary niantso ny medialight. Nandeha be izy ireo nanampy ahy. Handidy azy ireo indray amin'ny fo mitempo. Serivisy mpanjifa miavaka vokatra tsara!
Fanavaozana tonga lafatra amin'ny jiro taloha
Manomboka vita ny traikefa miavaka. Ny fepetra fifanarahana boaty misokatra dia toy ny vaovao, tsy fantatra ny mahasamihafa azy. Ny jiro dia napetraka ary niasa araka ny voalaza ao amin'ilay tranonkala sy ireo horonan-tsary. Serivisy ho an'ny mpanjifa miavaka avy amin'i Jason. Jiro novidiana sy kapila fanamafisana. Aza mitady lavitra intsony.